Nkwụ ụgwọ ụlọ ntụpọ | China Lay-flat Pouches Manufacturers, Ndị na-eweta ya
A na-emechi obere akpa akara atọ, nke a makwaara dị ka obere akpa, na akụkụ abụọ na ala, wee hapụ elu maka mejupụta ọdịnaya ahụ. Typedị pouches a bụ obere akpa ego dị larịị, ọ bụghị naanị mfe jupụta ngwaahịa kamakwa ọ na-eri ọtụtụ ihe. Ọ bụ nhọrọ zuru oke maka obere, otu na-eje ozi, na nri nri ma ọ bụ ngwaahịa dị ukwuu iji jiri dị ka onyinye. Flat pouches bụkwa ihe a ma ama maka nkwakọ ngwaahịa na nri nri oyi.
Akpa uwe a na-akpọ plowlow bụ otu n'ime ụdị ọdịnala ọdịnala kachasị mma na nke niile nwere ike iji nweta ngwugwu ngwaahịa dị iche iche. - a na - ahapụkarị oghe maka imeju ọdịnaya.
Akpa akpa gusseted n'akụkụ nwere gussets abụọ dị n'akụkụ n'akụkụ pouches, na-eme ka ikike nchekwa ahụ dịkwuo elu, bụ nhọrọ dị ukwuu maka ịkwakọba nnukwu ngwaahịa. E wezụga nke a, ụdị pouches ndị a na-ewe obere ụlọ ma ka na-enye ọtụtụ akwa canvas ohere maka igosipụta na ire ahịa gị. Site na njirimara nke ọnụ ahịa dị nwayọ nke imepụta, ndụ na-ejide anya na asọmpi ego nke ịzụrụ, obere akpa gusset bụ akụkụ dị mkpa na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe.
Agụụ agụụ bụ usoro nke mbukota na-ewepụ ikuku site na ngwugwu tupu ịka ya akara. Ebumnuche nke nkwakọ ngwaahịa na-abụkarị iwepụ oxygen site na akpa iji gbatịkwuo ndụ nke nri, na ịnakwere ụdị nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe iji belata ọdịnaya na olu nke nkwakọ ngwaahịa ahụ.